युट्युव च्यानलप्रति जनमानसको मान्यतालाई यसरी तोड्यो रमेशराजको 'राखी' ले, हेर्नुहोस् भिडियो - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
युट्युव च्यानलप्रति जनमानसको मान्यतालाई यसरी तोड्यो रमेशराजको ‘राखी’ ले, हेर्नुहोस् भिडियो
‘राखी’ को अत्याधिक चर्चासँगै उत्साहित रमेशराज, हेर्नुहोस् भिडियो
पछिल्लो समय नेपाली गायन क्षेत्रका कलाकारहरुको अन्तिम बाँच्ने आधार युट्यु बनिरहेको छ । राम्रो सिर्जना ल्याए गीतले राम्रो चर्चा अवश्य दिनेछ भन्ने उदाहरण पछिल्लो समय रमेशराज भट्टराईको ‘राखी’ गीतले प्रमाणीत गरेको छ । साथै गीत चर्चागर्न योग्य भए अपलोड गरिएको च्यानल नै दरो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि यो ‘राखी’ गीतले तोडिदिएको छ । बरु गीत गहकिलो भए च्यानललाई नै सपोर्ट हुने सावित गरिदिएको छ ।
नोभेम्बर २२ मा गायक रमेशराज भट्टराईको अत्यन्तै न्युन सब्सक्राइब भएको आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिसएको हो । ‘राखी’ गीतका शब्द, संगीत र स्वर नै अब्बल र भिडियो पनि उतिकै उत्कृष्टताका कारणले नै हुनुपर्दछ गीतले अपलोड भएको छैटौं दिनमै १२ हजार सब्सक्राइबर कमाउन सफल भयो । क्रमशः गीतको भिउज, कमेष्ट र लाइक पनि बढ्दै गयो । अन्ततः गीत ट्रेयिडङमै पर्न सफल भयो । डिसेम्बर १ मा १८ औं स्थानमा रहेको गीत १ दिन पछाडि डिसेम्बर २ मा नै १६ औं स्थानमा रहन सफल भयो ।
सार्वजनिक गीतमा रमेशराज भट्टराई कै शब्द तथा संगित र स्वरमा रहेको छ । यस गीतको म्युजिक भिडियोमा दुर्गेश थापा र शिल्पा पाखरेलको अभिनय रहेको गीतको भिडियोलाई क्रान्ती केसिले निर्देशन गरेका छन् । यो समाचार तयार पारेको समयमा गीत २७ औं ट्रेण्डिङमा पर्न सफल भएको छ । युट्युवमा गीतलाई १३ हजार बढीले लाइक गरेका छन् भने १ हजार बढीले कमेष्ट गरेका छन् । कमेष्ट प्रायसबै सकारात्मक छन् ।
गीत सोचे भन्दा धेरै सफल भएको भन्दै चर्चित गायक रमेशराज भट्टराईले भने ‘गीत आफ्नै च्यानलबाट पब्लीस गरियो, चिन्ता पनि थियो । तर उत्कृष्टतामा कुनै कम्प्रोमाइज नगरे दर्शक श्रोताले जहाँ जसरी नि खोजी खोजि हेर्नु र सुन्नु हुने रहेछ । उत्साहजनक रुपमा दर्शक श्रोताको माया र हौसला पाईरहेको छु , धेरैले आफ्नै जीवन संग मेल खाएका कुराहरु पनि गर्नुहुन्छ ,कसैले गीत सुनेर रोएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ । जे होस् को प्रतिक्रियाले मलाई थप उर्जा मिलिरहेको छ । आगमी दिनमा पनि अझ राम्रो गर्ने कोशिष गर्नेछु ।’
रमेशराज आधुनिक र लोकदोहोरी क्षेत्रमा उतिकै क्रियाशिल रहँदै आएका छन् । उनका प्राय सिर्जनाहरुले दर्शकको मन मुटुमा अड्डा जमाउन सफल भएका छन् । छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक रमेशराजलाई उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना ।
रमेशराजकी ‘नथियावाली’ रिस्ता बनेपछि चर्चामा ! हेर्नुहोस् भिडियो !